စက်တင်ဘာလသည် Scorpio အတွက်ကောင်းသောလဖြစ်ပါသလား။ - Oscရာဝတီ
စက်တင်ဘာလသည် Scorpio အတွက်ကောင်းသောလဖြစ်ပါသလား။
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - Scorpio လစဉ် Horoscope နှင့်စက်တင်ဘာလ
စက်တင်ဘာအတွက်နက္ခတ်ဗေဒင် 2020ကင်းမြီးကောက်နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုကတိပေးသည်ကောင်းတယ်ကျောင်းသားများနှင့်သူတို့၏ပညာရေးတိုးတက်မှုအတွက်အချိန်များ။ အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာလေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်သူများသည်သူတို့၏လေ့လာမှုတွင်ထူးချွန်ကြလိမ့်မည်။ နည်းပညာကျောင်းသားများသည်သူတို့၏လေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြnoနာမရှိပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာစာမေးပွဲများကိုရှင်းလင်းရန်ပုံမှန်အားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဇွန်လကလေးဖြစ်ပါကသင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့တူညီသောအရာမျိုးကိုနှစ်သက်လိုလျှင်၊ အခြားသူများကိုဘေးဖယ်ထားလိုပါက၊ သင်ဇူလိုင်လတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသူနှင့်အမြဲတမ်းပြည့်နေလိမ့်မည်။ သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံခြင်း၊ သင်ကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုပြောခြင်းသည်ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပြီးသြဂုတ်လတွင်သင်မွေးဖွားခဲ့သည့်ကလေးငယ်များဖြစ်ခဲ့လျှင်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပြန်လာခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပတ်ခြင်းသည်ဒုတိယစက္ကန့်သာကြာပါသည်။ စက်တင်ဘာစက်တင်ဘာလကလေးများသည်အလွန်အသေးစိတ် ဦး တည်သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့လျှင်သင်သည်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်သော်လည်းအမြဲတမ်းစုံလင်သောအရာအားလုံးရှိဖို့လိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝရှိလူများထံမှမျှော်လင့်ခြင်းစက်တင်ဘာကလေးများသည်အဖွဲ့အစည်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအလွန်မျှော်လင့်ထားပြီးတစ်စုံတစ် ဦး ကမအောင်မြင်လျှင်စက်တင်ဘာသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာအောက်တိုဘာအောက်တိုဘာကလေးများအလွန်ဝေဖန်ခံရလိမ့်မည် အလင်းရောင်နှင့်ဂရုစိုက်မှုကင်းမဲ့မှု၊ သူတို့သည်အလွန်လွတ်လပ်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါကသင်သည်တောက်ပသောဘက်ကိုကြည့်ရှုသောအခါမကြာခဏကောင်းမွန်စွာမမြင်နိုင်ပါ။ ထို့နောက်အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသူများစွာကိုရှာရန်ကြိုးစားရမည် အောက်တိုဘာကကလေးတွေကပျော်စရာကောင်းပြီးစကားပြောတတ်ကြလို့သူတို့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှပပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။ နိုဝင်ဘာလမှာသင်မွေးဖွားလာရင်နိုဝင်ဘာလမှာမွေးဖွားမယ်ဆိုရင်မွေးဖွားလကမင်းအကြောင်းဖော်ပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်နိုဝင်ဘာကလေးတွေကများသောအားဖြင့်ခေါင်းမာပြီးအလွန် လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ထားရမယ်၊ နို ၀ င်ဘာလကလေးကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်တဲ့အခါမကောင်းဘူး။ ကြီးမြတ်မှုအတွက်အလားအလာ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်အလွန်ပါးနပ်သော၊ မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောနိုဝင်ဘာကလေးများဖြစ်လေ့ရှိသည်၊ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်ကြီးပြင်းလာနိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလကလေးများဖြစ်လိုလျှင်သာပျော်စရာကောင်းသည်။ သူတို့သည်လူအများနှင့်ပြည့်နေသည့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်ရှိနေသည့်အခါသူတို့သည်သင့်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ ဒီဇင်ဘာလတွင်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းသင်သည်အိမ်တွင်တက်ကြွစွာထိုင်ပြီးသင်၏လက်ဖက်ရည်မဟုတ်သောတီဗွီကိုကြည့်ကောင်းမြင်နိုင်သည်။ ဒီဇင်ဘာလကလေးများသူတို့ကိုယ်သူတို့အလွန်ဂုဏ်ယူကြသည်။ ribe တစ်ခုခုမှကန့်သတ်ထားသောကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုရယူပါ
၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ Scorpio အတွက်ဘယ်လိုနေလဲ။
Scorpio အတွက်သင်၏စက်တင်ဘာ ၂၀၀၀ Horoscope
Onစက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်အင်္ဂါဂြိုဟ်သည်လီယိုရှိ Venus နှင့် Sagittarius South Node နှစ်ခုလုံးအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်အဆင်ပြေမှုမရှိသောအခန်းကဏ္stတွင်မပါဝင်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်နှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အခွင့်အရေးအသစ်ရှိနေသည်။ သို့သော်သေချာစွာစဉ်းစားပါ မည်သည့်ကတိကဝတ်များမချခင်။၂၉ ။ 2020 ။
2021 Scorpios အတွက်ကောင်းပါသလား?
ကင်းမြီးကောက်နှစ်စဉ်အလုပ်ရှာဖွေရေး horoscope2020အာကာသစခန်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်2020 ခုနှစ်တွင်,ကင်းမြီးကောက်ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာအချို့နှင့်အတူအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ကောင်းတယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ်းလှမ်းမှု။ ဂြိုလ်များသည်သင်၏မျက်နှာသာရပုံရသည်။ကင်းမြီးကောက်,2020 ခုနှစ်တွင်။ တကယ်တော့နှစ်သစ်မှာမင်းအလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။၃၁ ။ 2019 ။
ဒီ Scorpio အတွက်မကောင်းတဲ့အချိန်လား?
ကင်းမြီးကောက်ဇွန်လ ၂၀၂၁ horoscope ကဒီလမှာကံကောင်းခြင်းကသင့်ကိုမျက်နှာသာပေးလိမ့်မယ်လို့အကြံပြုတယ်။ ဤသည်ကြီးမြတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်အချိန်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ သြဂုတ်လအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီကင်းမြီးကောက်ကစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုများကိုပါလိမ့်မယ်အဖြစ်။ သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်မတူပါ။
ဟေး, Scorpio ။ နောက်သုံးလအတွက်သင့်စာဖတ်ခြင်းကိုကြိုဆိုပါသည်။ ဤသည်စာဖတ်ခြင်း, ဆိုလိုသည်မှာ, 2021 ၏ဒုတိယသုံးလပတ်အဘို့ဖြစ်၏
ပြီ၊ မေနှင့်ဇွန်။ မင်းရဲ့ယေဘုယျစွမ်းအင်ကိုဒီပထမတန်းမှာငါတို့ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယအတန်းတွင်သင်၏အနာဂတ်မိမိကိုယ်ပိုင်သတင်းစကားများကိုကြည့်ပါမည်။
ဒါကြောင့်ဒီဟာဇွန်လကုန်မှာအခြေခံအားဖြင့်သင့်ဆီကလာတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်သုံးလတွင်သင့်ကိုယ်သင်ဘာပြောရမည်နည်း။ ကျနော်တို့ Scorpio, ခရီးသွားဒီမှာခရီးသွားလာ။
နောက်လာမည့်အတန်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မျှော်လင့်မထားသောသတင်းကောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မျှော်လင့်မထားသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည်။ သင်၏နောက်ဆုံးအတန်းတွင်သင်၏လမ်းပြလမ်းညွှန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည်။ အဆုံး၌လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်မေးခွန်း ၃ ခုကို (သို့) အဘယ်သူမျှမမေးဘဲနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသင်သာမန်မေးခွန်းတစ်ခုမေးနိုင်သည်။
Scorpio ကိုသင်စာဖတ်ရန်မည်သည့်မေးခွန်းကိုသင်သိသည်နည်းတူကတ်ပြားသုံးခုကိုဆွဲ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုပြန်ပြောပါလိမ့်မည်။ ငါတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ လူတွေကဘယ်လိုကြိုက်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ကဒ်သုံးကဒ်နှင့်သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသိဘဲသင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပြောပြရန်ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ Scorpio၊ မင်းစဉ်းစားတာကိုငါ့ကိုသိပါစေ Scorpio၊ ဒါဆိုမင်းဒီမှာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
Scorpio သင်၏နေ၊ လနှင့်ဤအချိန်အတွင်းသင့်အတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမြင်နိုင်ရန်အတွက်သေချာစွာကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့် Scorpio, Scorpio, ဒီမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုကနေကြည့်ရအောင်။ မင်းဒီနေရာကိုမင်းသေသေကတ်ပြားအဖြစ်ပြသတာပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမင်းဟာအသွင်ပြောင်းမှုကိုဖြတ်သန်းသွားနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။
သင်ဒီမှာတစ်ခုခုကိုနိုးနေသလိုပါပဲ Pisces နှင့်အလွန်ဆင်တူသောစာဖတ်ခြင်းရှိသည် ၎င်းသည်သင်၏ကံကြမ္မာကိုနိုးထစေခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ကံကြမ္မာနှင့် ပို၍ နီးကပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုနှိုးခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
မင်းမှာအဲဒါတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒီမှာထူးခြားတဲ့ kinetic energy ။ Pisces မှာ kinetic energy အများကြီးရှိတယ်။ ဒီခရီးသွားမြေပုံလည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့ထဲကတချို့ဟာခရီးသွား၊ ပြောင်းရွှေ့၊ ဤကဲ့သို့သောခရီးကိုသွားနိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။
မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက၊ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသွားမလား။ သံသယဖြစ်သော်လည်းသင်သိသည်မှာခရီးသွားရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လာမည့်သုံးလတာကာလအတွင်းအခြေအနေများပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည့်လက္ခဏာကောင်းဖြစ်သော်လည်းသေတမ်းစာကဒ်တွင်လည်းပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တူသည်။
ငါပြောချင်တယ်။ ငါပြောချင်တာကသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာကဒီလမှာအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ်။ မင်းဆီမှာသုံးခုရှိတယ်။
Pentacles သုံးခုသည်ငါခံစားမိသည့်အတိုင်း၊ သင်၏ဘဝ၌သင်တစ်ခုခုလုပ်နေသည်၊ သင်ထင်သည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနှစ်သက်သည်။ ငါမင်းအတွက်ထူးဆန်းတဲ့စာတွေရလိမ့်မယ်၊ Scorpio၊ ဒီကဒ်၊ ငါကထူးဆန်းတဲ့စာတွေရတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အချို့သောယောက်ျားများနှင့်တူသည်, ငါသည်လည်းမြင်းစီးခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်သင်ဒီမှာ sphinxes ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါအချို့သောအဘို့အသငျသညျတစ်ခုခုကိုလုပ်နှင့်တူသောသင်ထင်: သင်, ငါ၏ဘုရား, ဤသူကားအဘယ်သို့ငါ '' အချို့သောသူများအတွက်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေသည့်အရာမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ဝါသနာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်ဤယောက်ျားနှင့်အတူဤစွမ်းအင်နှင့်အတူရှိနေသောအရာတစ်ခုခုသည်သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိခြင်းအားဖြင့်တစ်ခုခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်လို့မင်းတွေအများကြီးအတွက်ခံစားရတယ်၊ ဒါကမင်းလုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ငါထင်တယ်။ လူတွေကိုငါအမြဲပြောနေတာကသင်ပျင်းသောအခါသင်ပြုရန်အကောင်းဆုံးမှာသင်ထွက်သွားပြီးဝါသနာပါသောအရာများကိုစမ်းကြည့်နိုင်သည်၊ သင်တစ်ခုခုသို့ရောက်သောအခါအခြားအရာများကသူတို့၏နေရာကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုအခါငါမျိုးဒီမှာစွမ်းအင်ရ။
ကျုပ်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတောက်ပတဲ့နေ့ရက်များဆိုတာသေမင်းကံကောင်းခြင်းပဲ။ မင်းဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရောက်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်နေကလပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်နေတဲ့တိုင်နှစ်ခုကြားမှာရှိနေတယ်။ ဒီမှာငါကြောက်စိတ်ရဲ့အဆုံးသတ်လိုပြောချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒါကတော်တော်လေးအားကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာသင်ကြာမြင့်စွာကြောက်ရွံ့ခဲ့ဖူးတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကျော်ဖြတ်ရတာနဲ့တူတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားရင်တောင်ငါတို့မှာသေမင်းကတ်၊ မာရ်နတ်နဲ့ဓားတွေရှိတယ်။ ဒါဟာမာရ်နတ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်၊ Scorpio က devilishly အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်ချစ်ကြတယ် ရှင်းလိုက်ရအောင် ပြီးတော့ဒီမှာမင်းရဲ့ပထမတန်းဖြစ်တဲ့ဖလားဘုရင်မင်းကိုငါတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဒီတော့ဒါကမင်းရဲ့စွမ်းအင်လို့ထင်တယ်။ Pentacles ၏ကိုး, ချစ်ကြတယ်။ ကျိန်းသေချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအများကြီးနှင့် wand ၏ရှင်ဘုရင်ကိုတည်ဆောက်ပါ။
သင်တို့အများစုအတွက်တော့မင်းကဒီစွမ်းအင်နဲ့များပြားစွာစီးဆင်းစေမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါဒီစွမ်းအင်ကိုသင်လေ့ကျင့်သည့်အခါအလားတူအရာများထံမှရ။ မင်းအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးမှာရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်အရာရာဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာမအောင်မြင်ခဲ့သလိုပဲ။
ဒါနဲ့တူတူပဲ၊ ငါနောက်ဆုံးတော့မင်းဟာမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်နည်းနည်းလောက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးပျောက်ဖို့နည်းနည်းပိုရနိုင်တဲ့အထိရောက်နေပြီလို့ခံစားရတယ်။ ဟုတ်တယ် သူမမှာ pentacles ခြောက်ခုရှိတယ်
သူမမှာသူ့ကိုယ်သူဂရုစိုက်ဖို့လုံလောက်တယ်ဆိုတာပြတယ်။ ပြီးတော့သူမဒီမှာ pentacles သုံးခုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့သူမပေးနိုင်တဲ့သုံးကန်လုံး၊ လူတွေကိုကူညီနိူင်တယ်၊ သူဝယ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကို ၀ ယ်ဖို့သုံးနိုင်တယ်။
ငါ့အတွက်, Pentacles ကိုးယောက်သည်ငွေကြေးလုံခြုံမှုအတွက်အလွန်ကောင်းသောကဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်သုံးလတာကာလအတွင်းသင့်အတွက်အဲဒါဟာအာရုံစိုက်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာသင်၌ရှိသည်သို့မဟုတ်ငွေကြေးလုံခြုံမှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်၊ မင်းကမင်းဒီခံစားချက်ကိုရရှိတဲ့အလုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးမင်းကဒီဘုရင်ကစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာလို့ပြောနေတယ်။
Scorpio ကဒီခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငါခံစားနေလို့ဒီအလယ်ပိုင်း Row မှာဘာတွေဖြစ်လာသလဲဆိုတာငါတို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ သင်တို့ထဲမှအချို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုသွားတွေ့နိုင်ပြီးယင်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီတော့မင်းမှာခရီးသွားကဒ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ပင်လယ်၊ ခရီး၊ ရထားနဲ့ငါပြောခဲ့သလိုပဲဒီခရီးသွားကဒ်တွေ။
ဒါ့အပြင်သင်ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်ဖလားတော်ဝင်ဘုရင်နှင့်အတူမီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေစာအမှတ်အသားတစ်ခုကြည့်ဖို့ခရီးထွက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားသူများအတွက်, သင်ရေစာသို့မဟုတ်မီးသင်္ကေတကိုကြည့်ရှုရန်ခရီးထွက်ရလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်နေသော်လည်း၎င်းသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်မဟုတ်ပါ။ သင်သိသည်မှာသင်အလုပ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအတွက်ထွက်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုသင်ငှားလိုသူနှင့်တူနိုင်သည်။ ဒီစွမ်းအင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်
မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၎င်းသည်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့စွမ်းကိုးခု၌အလွန်အမင်းကြွယ်ဝလိမ့်မည်။ နောက်အနာဂတ်မှာမင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မက်ဆေ့ခ်ျတွေပို့ပြီးမင်းမြေပုံကိုပင်လယ်ထဲရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဒီနေရာကိုစွန့်စားဖို့ပြောတာလိုငါခံစားရတယ်။
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် Scorpio ဟာငါဟာစွန့်စားစွမ်းအင်လိုခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့အနာဂတ်ကမင်းဟာမင်းကို hamster wheel ကနေဖယ်ထုတ်ပစ်စေချင်တယ်လို့ငါထင်လို့ပါ။ အဲဒါဟာထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မိသလိုမျိုး - ဒါကငါဒီမှာရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့်စီးပွားရေးမှာ။ မင်းကမင်းနဲ့နီးပြီလို့ခံစားရတယ်၊ မင်းဘ ၀ မှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးကိုဖြတ်သန်းသွားတော့မယ်၊ မင်းနဲ့ရင်းနှီးတယ်လို့ခံစားရပေမယ့်ငါဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုမျိုးရှိရမယ်။
ပြီးတော့သင်တစ်ခုခုပြောင်းရန်လိုသည်ကိုသိသည်နှင့်တူသည် ဒီတော့မင်းမှာကား၊ မာရ်နတ်၊ နှင့်နတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ရှိသည်။ သင်တို့တွင်အချို့သူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
တနည်းကား၊ အထူးသဖြင့်သင်သည် Scorpio သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါကသင်၏အနာဂတ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ မင်းဒီမှာနောင်တမရဘူး။ သင်၏အနာဂတ်အတ္တသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထံမှဝေးဝေးသွားရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာရထားနဲ့အတူဒီမှာသင်ရွေးစရာတစ်ခုလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာစွမ်းအင်ကိုအရမ်းထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ဒီလူနဲ့တူတူပဲ၊ ခင်ဗျားကဒါကိုအကန့်အသတ်နဲ့လုပ်နေသလိုပဲ၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မင်းဒီကို M နှင့်အတူဤနေရာတွင်အသစ်တစ်ခုစတင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။ ထို့အပြင်ငါ၌သင်၏အနာဂတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမင်းကိုပြသခြင်းကိုကျင့်သုံးစေလိုသည်ဟူသောခံစားချက်ရှိသည်။
ရထားသည်အထက်နှင့်တူသကဲ့သို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားပြီးနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်သည်သာထင်ရှား၏။ ဒါကြောင့်ငါမင်းရဲ့အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာဟာအပြင်ဘက်ကမ္ဘာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ မကောင်းတဲ့အလေ့အထတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲ၊ အဆိပ်အတောက်တွေကိုရှောင်နိုင်အောင်သင်မာရ်နတ်ပြောတာကိုသင်သိနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့်ငါတကယ်စဉ်းစားမိတာကခင်ဗျားဟာအရာရာကိုအရမ်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားရလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့အနာဂတ်ဆီကနေ၊ သင်ဇွန်လကုန်မှာအခြေခံအားဖြင့်ပါ။ Scorpio ကမင်းကဘာလဲ၊ မင်းကမင်းကိုကျန်းမာအောင်နေဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းသိရင်မင်းသောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုသောက်ရမယ်လို့ငါထင်နေတာလား။ မင်းကိုစိတ်မကောင်းဘူးငါလာမယ့်သုံးလလုံးလုံးမင်းကတကယ်ဆိုးတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းကိုမင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။
မင်းမသောက်ဘူး၊ ဘာမှမသောက်ဘူးလို့ငါမပြောဘူး ဒါပေမယ့်မင်းအနာဂတ်အနာဂတ်လို့မင်းပြောနေတာနဲ့တူတယ်၊ မင်းဟာအရာရာဟာမင်းကိုနက်ရှိုင်းတဲ့အဆင့်မှာအကျိုးသက်ရောက်စေမယ်ဆိုတာသင်သိတယ်။ မင်းကအထိခိုက်မခံတော့ဘူးလို့ငါထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းဒါကမကောင်းဘူးလို့မထင်ဘူး၊ ငါဟာဒီအရာကောင်းတယ်ထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဒီအင်းဆက်ပိုးမွှားသေးသေးလေးကိုတီထွင်နေသလိုခံစားရတယ်၊ ဟုတ်လား? သငျသညျပတ်ပတ်လည်ခံစားရနိုင်အောင်။
ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းဟာအကင်းပါးပါးဖြစ်ရမယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါဒီမှာအရမ်းအထိခိုက်မခံတဲ့စွမ်းအင်ရတယ်။ ဒီရေအားလုံးကမင်းရဲ့စာဖတ်ခြင်းထဲမှာပါနေတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဤအမှုကိုသိနှင့်ငါသည်လည်းဤနေရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ငါထင်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။
ဒီမှာမင်းရဲ့လမ်းပြတွေကမင်းဟာအကင်းပါးပါးနဲ့ခွက်ဖလားကိုခံစားမိလိမ့်မယ်လို့ပြောနေသလိုပဲ ဒါပေမယ့်သင်လုပ်ရမှာကအချို့သောအရာများ၊ သင့်ရှေ့တွင်ရောက်ရှိတော့မည့်အခွင့်အလမ်းအချို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤအခွင့်အလမ်းများ, အောင်ပွဲမှ ဦး ဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်အဲ့တာအပြင်၊ ငါဟာအရက်သောက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်သင်စားတဲ့အစာတချို့ဟာမင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤသူသည်သင်နှင့်အတူဆုံတွေ့သူအချို့ဖြစ်နိုင်သည်၊ မင်းရဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းသတိထားရမယ်လို့ခံစားမိသလိုခံစားရတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းက Scorpio ကိုငါထုတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားနေသောမြင့်မားသော sensitivity ကိုလိုချင်နေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမာရ်နတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းလိုက်တဲ့အခါသင်ကောက်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုသင်မရွေးသလိုခံစားရတယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီမှာဒီမှာပြောနေတာပဲ။
ဒီတော့ဒါကိုရှင်းရအောင်။ ငါကြိုက်တယ်ငါ Scorpio ဒီမှာမင်းကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်၊ ဒါလည်းမကောင်းဘူး၊ ကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ခွက်အိုး၊ ဘာသိသလဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆွဲဆောင်နိုင်၊
သင်ငါးတစ်ကောင်နှင့်တွေ့ဆုံလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ငါးတစ်ကောင်နှင့်သော်လည်းကောင်းဆက်ဆံလျှင်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် Pisces စာဖတ်ခြင်းနှင့်တူပြီး၎င်းသည်အရူးဖြစ်သည်။ မင်းမှာမင်းက Pisces ရှိတဲ့ဖလားဘုရင်နဲ့ဘုရင်မတောင်ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်သင်တို့ထဲကတချို့ဆိုရင်ဒီဟာတွေဟာဘုရားသခင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်တယ်။ နံပါတ်တစ်နဲ့သင်သိတယ်။ ငါနဲ့ဘုရင်နဲ့ဖလားဘုရင်မကြီးဟာဘုရားသခင့်ပြိုင်ဖက်တွေအဖြစ်ပြသဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျား၊ မဖြစ်စေဖြစ်နိုင်တယ်၊ ကျား၊ မကိုမဖော်ပြသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လူတစ် ဦး အားချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကဒ်ပြားသို့လာသည်ဟုခံစားမိသည်။ ဤသည်သင်၏လျှံခံစားမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခင်ဗျားဒီမှာရှိနေတဲ့ ၀ န်းရံတွေ၊ စွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုနဲ့ဝံဆယ်ခုကျတော့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေတယ်။
မင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုငါကာကွယ်ပေးမယ်၊ ဒီစီးရီးမှာမင်းကဒီစိတ်ခံစားမှုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအမြဲရတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်အားကောင်းသောကဒ်ပြားဖြစ်သောဖလားဘုရင်နှင့်အတူပင်သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုကာကွယ်ရန်၊ သူတို့ကိုအပြုသဘောဆောင်ရန်နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့ပင်အလွန်အရေးကြီးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အနာဂတ်ဟာမင်းအဲဒီလိုပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။
ငါသည်လည်းစွန့်စားမှုသွားကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ၀ ံပုလွေ၊ စွန့်စားခန်းကဒ်၊ စာမျက်နှာတစ်လျှောက်လုံးငါပြောနေတာတွေအကြောင်း၊ မင်းဘဝမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဦး တည်စေလိမ့်မယ်လို့ငါခံစားရတယ်။ ဒီခရီးစဉ်မှာတောင်ဒီခရီးစဉ်ဟာမင်းအတွက်အရမ်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လိုပဲ။
ကြည့်ရအောင် ဒီစီးရီးထဲမှာမင်းအတွက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့မင်းမမျှော်လင့်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ကြည့်ကြမယ်။ မင်းမှာခရီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့်အစကတည်းကဒါဟာမမျှော်လင့်တဲ့ခရီးတစ်ခုလိုဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင်ဒီမှာလာဖို့မမျှော်လင့်တဲ့ခရီးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
ခင်ဗျားခရီးသွားဖို့မျှော်လင့်မထားတာဖြစ်မယ်၊ ခင်ဗျားသိတယ်၊ လူတစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်ကဒ်များကိုကျား၊ မမရေးပါ၊ သင်ခရီးသွားနေသောသူနှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။ Wand ဘုရင်ကိုဒီမှာငါတို့ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်မင်းမှာ Sword Ace, Cup Ten နဲ့ Pentacle Ace တွေရှိတယ်။
ငရဲ, ဒါကတော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ပုံပြင်။ သင်တို့အချို့အတွက်၊ အွန်လိုင်းမှတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဤသူသည်သင်နှင့်အတူမိသားစုရှိမည့်တစ်စုံတစ်ယောက်၊ ခွက် ၁၀ ခု၊ Pentacle Ace၊ လက်ထပ်ရန်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
သင်တို့ထဲကအချို့သည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ဤအရာသည်ဝေးလံသောဝေးကွာသောဆက်ဆံရေးနှင့်တူပြီးသင်ခရီးသွားနိုင်သည်၊ သင်ကဟန်ချက်ကိုဆောင်ခဲ့သောအရာများသို့ရောက်သည်။ ငါ Pisces အတွက် Neptune မှအကွာအဝေးရှည်လျားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမကြိုက်ဘူး။ ငါတို့မှာ Neptune Pisces မှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းအများကြီးရှိတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမင်းဒီမှာရှိနေတဲ့အကောင်းဆုံးကဒ်ပဲ။ မင်းကဒီထက်နည်းသွားရင် Ace of Swords လိုပဲ။ Ace of Swords သည်အရာများကိုဟန်ချက်ညီစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရေးကြီးသောကြောင့်၎င်းသည်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အရာများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတားအဆီးအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
ဒါကြောင့်ဒီဟာကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပါ။ ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်မထားဘူးလို့ငါခံစားရတယ်။ အခြားသူများအတွက်၊ ဤခရီးစဉ်သည်သူတို့စီးရီးတွင်ဤအစီးနှစ်ခုကိုရှာရန်မမျှော်လင့်ပါ။ မင်းမှာအေ့စ်သုံးခုရှိတယ်၊ ဒါအရူးပဲ၊ နောက်သုံးလလောက်ကမင်းအတွက်သိပ်ကောင်းတဲ့စာဖတ်ခြင်းပဲ၊
သင်တို့မူကားနောက်တဖန်ထားကိုအေ့ရှ, သင် pentacles Ace, ဒီအခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ခုကိုမျိုးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မင်းကိုအရမ်းပျော်မှာပါ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ပြီးနောက်မှာခွက် ၁၀ ခွက်ကကံကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ခရီးစဉ်တစ်ခုလား၊ ခရီးစဉ်ဖြစ်စေ၊ အခြားခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်စေခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
ခရီးစဉ်သည်အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူနိုင်သည်၊ ကျောင်းသွားနိုင်သည်၊ အလုပ်သင်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်လုပ်သောအရာ၊ သင်သွားသောခရီး။ နောက်ပြီးစာသားကိုမစဉ်းစားပါနဲ့၊ မစဉ်းစားပါနဲ့၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းအဲဒါဟာပကတိဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောသလိုပဲကျောင်းမှာလက်မှတ်ရဖို့လိုတယ်။
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် ဒီမှာမင်းအတွက်အောင်ပွဲကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် Scorpio ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြည့်ရအောင်၊ ငါတို့ pentacles နှစ်ခုကိုဒီမှာကြည့်ကြရအောင်။
ငါဒီမှာဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ တရားမျှတမှုကဒ်အကြောင်းရင်းတွေ၊ အကျိုးဆက်တွေကိုငါသဘောကျတယ်၊ ပြီးတော့ဒီမှာဘုရင်ဓားတွေကိုလည်းချစ်တယ်။ မင်းအဖေအတွက်မင်းအတွက်လာတဲ့မင်းဟာမင်းထက်အသက်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါမသေချာတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အကယ်၍ သင်ဟာဒီ pentacles နှစ်ခုနှင့်အတူဒီခရီးကိုသွားခဲ့ရင်ဒီမှာအလုပ်လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ငါခုခံနည်းနည်းရတယ်။
ခရီးသွားတဲ့အခါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုငယ်တစ်ခုလိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ သင်သိတယ်၊ သင်သိတယ်။ ငါဟာတစ်စုံတစ်ယောက်ကသင့်ကိုငှားရမ်းပြီးသူမပြောတာ၊ မင်းကနှင်ထုတ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်၊ ငါ့ခေါင်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုရတယ်။ အကယ်၍ သင်ဒီမှာသာရှိလျှင်ငွေကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်အမ်းပါမည် သင်စဉ်းစားမိသည့်ထူးဆန်းသည့်အချိန်များထဲမှတစ်ခု၊ “ အို၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပိုက်ဆံတကယ်မရှိဘူး။
ဒီတော့မင်းကပိုက်ဆံရဖို့နည်းနည်းလေးလုပ်ရတော့မယ်၊ ၎င်းကိုခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုပေါ်တွင်ရေးသားရန်။ ငါ့စိတ်ကိုဘာကြောင့်ဖြတ်သွားတာလဲမသိဘူး၊ ဒါ့အပြင်မမျှော်လင့်ဘဲပါ။
ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုပြောပြရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာမင်းနဲ့တူတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုခံစားရတယ်။ တစ်ခုခုတော့မှန်တယ်လို့ခံစားရပြီးမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမင်းယုံဖို့လိုတယ်လို့ငါတကယ်ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အာရုံကိုမှေးမှိန်သွားအောင်မလုပ်ဖို့ငါပြောတာကမာရ်နတ်နဲ့ငါဒီကိုရောက်လာတာပါ။ Scorpio ကိုဖတ်ပါ၊
Michael Scott ပြောသလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအရာအတွက်ဘဏ္financialာရေးခြေရာခံဖို့လိုပါတယ်။ ထိုအပင်သင်သိ, သူသည်ဤ pentacles နှစ်ခု၏အောက်ခြေတွင်ကခုန်တူ, ဒီအခါသမယအချို့အားထုတ်မှုကြာသို့မဟုတ်သင်ကထွက်တွက်ဆရန်လိုအပ်သကဲ့သို့။ တရားမျှတမှုဆိုသည်မှာအကြောင်းအရင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြေအနေတစ်ခုကိုသင်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါကအောင်မြင်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ချစ်ကြတယ် ဒါကကျိန်းသေအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ တခြားသူတွေအတွက်တော့တရားဝင်အောင်ပွဲကတရားဝင်အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
ဤအချိန်၌သင်၏လမ်းညွှန်များကိုသင်သိစေချင်သောအရာများကိုနောက်မှဆက်လုပ်ပါ။ မင်းအချိန်ကဒီမှာမင်းတို့ဘုရင်မဘုရင်မရှိတယ်။ ပြီးတော့မင်းတို့မှာမြေပုံထက်ကျော်လွန်တဲ့အမြင်ရှိတယ်။
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကိုမင်းယုံနိုင်တယ်လို့ငါထင်တယ်။ သူတို့မှာချာ့ချ်၏ဘုရင်မ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့် ၀ ီဂမင်းငါးယောက်ရှိတယ်။ ငါသူတို့တောင်းဆိုနေတဲ့ခံစားချက်၊ မင်းရဲ့လမ်းပြတွေကပြောနေသလိုခံစားရတယ်။ တကယ်တော့ငါခံစားချက်တစ်ခုရှိတယ်။ ဒါက wand ငါးခုရဲ့ဒီစွမ်းအင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားစရာမရှိဘူး။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်နောက်လာမည့်သုံးလအတွက်, ဒါကနောက်တဖန်အလွန်အရေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်ငါဒီတိုးမြှင့် sensitivity ကိုနှင့်အတူငါခံစားရတစ်နည်းနည်းနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ မင်းသာမန်အားဖြင့်သင်မခံစားမိသည့်အရာများနှင့်သင်ပုံမှန်မခံစားရသည့်အရာများကိုခံစားနေရသည်ဟုခံစားမိသည်။ မင်းရဲ့လမ်းညွှန်တွေကမင်းကိုဒိုင်ယာရီလိုမျိုးအရာတွေချရေးစေချင်သလိုခံစားရတယ်
မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေရှိရင်ငါဟာအခြားတစ်ဖက်ကနေပစ္စည်းတွေကိုယူနေသလိုခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်သင်သိတဲ့အတိုင်း၊ သင်ဟာဒိုင်ယာရီကိုရေးခြင်း၊ ရေးချခြင်း၊ ဒီမှာငါခြုံငုံသုံးသပ်ရှိသည်။
ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းပconflictိပက္ခရှောင်ရှားလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာအငြင်းပွားစရာမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပconflictိပက္ခဖြစ်စေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုရှောင်ရှားဖို့ပဲ။ ငါမင်းတို့ရဲ့လမ်းပြတွေကမင်းကိုကြိုက်နှစ်သက်တာ၊ မင်းကိုဂရုစိုက်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွေးမွေးတာ၊ အနားယူတာ၊ အနားယူခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ သိပ်စွမ်းအင်နှင့်အတူအခြားကောင်းသောအရာ။
ဒီမှာကြည့်ရအောင် ငါလည်းမင်းအတွက်ငါးတစ်ကောင်ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့်အတူပြောခဲ့ပေမယ့်ဖွင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ငါတို့ရရှိသောအရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့လိုပဲ
Pentacles သုံးခု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ယခုလတွင်အိပ်မက်မက်စေလိမ့်မည်။ မင်းမှာဒီသုံးခုရှိ Pentacles သုံးခုရှိခဲ့တယ်။ ငါတောင်မှတောင်မပြောခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းတစ်ခုခုလုပ်နေပြီဆိုရင်မင်းရဲ့လမ်းပြတွေကမင်းကိုတခြားလူတွေနဲ့ပဲလုပ်ခိုင်းစေချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေကမင်းကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်စေချင်တယ်။ မင်းရဲ့လမ်းပြတွေကမင်းအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတာလို့ငါထင်တယ်။
စာသားငါ့ခေါင်းထဲဝင်လာတဲ့စကားလုံးတွေကကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းနဲ့အတူငါခံစားရတယ်၊ မင်းရဲ့လမ်းပြတွေကဒီမြေပုံကိုမင်းနောက်ကျောမှာကပ်နေတယ်။ ပစ္စည်းပစ္စယမဖွစျနိုငျ, ဆွဲထားသောသူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကရှင်းပြသည်။
ကျိန်းသေတစ်ငါး။ ငါသည်ဤကဒ်ဖြင့်သင်၏ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုယုံကြည်ရန်လိုသည်ဟုခံစားမိသည်။ ဆွဲထားသူသည်ဉာဏ်အလင်းရရှိရန်အတွက်သူ့ကိုယ်သူ hangman mode တွင်ထားလေ့ရှိသည်။
ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာမင်းအဖြေတွေအများကြီးရနေသလိုပဲ၊ မင်းရဲ့အဖြေများ၊ သင်ဒီမှာနိုးနေသလိုပဲ။ မင်းကိုဒီမှာနှစ်ကြိမ်စစ်ကြောစီရင်ခွင့်ရမယ်လို့ငါခံစားရတယ်။
သင်ခုခံတွန်းလှန်နိုင် ဒါကအနည်းငယ်ကြောက်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် မင်းသိတယ်၊ ငါဒီနေရာမှာခံစားချက်တွေ ၀ င်လာတဲ့ခံစားချက်ရှိတယ်။
သင်၏လက်ရှိယုံကြည်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာတစ်ခုခုကိုသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်တူ၏။ သင်ဟာကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုယုံကြည်နိုင်ပေမဲ့တစ်ခုခုကိုရှာဖွေတာကမမှန်ဘူး မင်းရဲ့မတ်လစာဖတ်ခြင်းမှာမင်းကိုငါပြောခဲ့သလိုငါခံစားရတယ်
မင်းကမင်းပဲဆိုတာသေချာပါတယ် ဘယ်သူ့ကိုမှမမှတ်မိဘူး၊ မမှတ်မိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်း Matrix ရုပ်ရှင်ကိုမင်းမြင်ဖူးသလိုမျိုး။ Neo ကဆေးအနီရောင်ကိုယူတယ်၊ သူနိုးလာပြီးသူတို့ကို matrix ထဲထည့်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်သူကရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းမြန်လွန်းတဲ့အတွက်နိုးလာတာပေါ့။ ဒါဟာသင့်အတွက်ဖြစ်ပျက်နိုင်တဲ့အလားနီးပါးပါပဲ။ ဒါဟာအဖြစ်မှန်တစ်ခုမှာနိုးလာတာနဲ့တူပြီးဒါဟာအနည်းငယ်မသက်မသာပါပဲ။
ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ပါ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပါ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွေးမွေးပါ။ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုဒီနေရာမှာတစ်ခုခုနဲ့နိုးနေသလိုခံစားရတယ် အိုကေ၊ အခုကဒ်သုံးခုဆွဲတော့မယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုခေတ္တရပ်တန့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး၊ နှစ်၊ သုံးခုလုပ်တော့မယ်။ ဒီစာကိုကိုယ်ပိုင်စာဖတ်ခြင်းလို့ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်။
ဒီဟာကအဓိပ္ပါယ်ရှိရင်ငါ့ကိုသိပါစေ။ ငါမေးခွန်းတစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းသုံးခုဖြေပါလိမ့်မယ်။ ငါကမင်းကို 'ဟုတ်တယ်' 'မဟုတ်ဘူး' မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ 'မင်းရဲ့မေးခွန်း' ကိုဖြေနေသလိုဖြေပါ့မယ်။
ဒီတော့အာရုံစူးစိုက်။ သင်၏မေးခွန်းများကိုစဉ်းစားပါ။ ဆောင်းပါးကိုခေတ္တရပ်တန့်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
တစ်၊ နှစ်၊ သုံးကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဒီမှာနံပါတ်တစ်ကိုသွားမယ်၊ ငါပြောချင်တဲ့ချစ်သူတွေရှိတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါကတကယ်အချစ်ပဲ။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုမေးကောင်းမေးကောင်းယူဆလိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာစာဖတ်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးသင့်အတွက်လာနေတဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲလို့ခံစားရတယ်။
အခြားသူများအတွက်၊ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ယခုမေးမြန်းနေသောမေးခွန်းသည်သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်တန်ဖိုးများနှင့်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်တွင်သင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားခြင်းများအပေါ်တွင်အခြေခံရမည်။ သင်လမ်းဆုံလမ်းခွမှာရောက်နေသလိုပဲ ငါသည်သင်တို့ကိုလုပ်နှစ်ခုရွေးချယ်မှုရှိသည်ကြည့်ပါ။
တစ်ယောက်ကကြည့်ရတာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာသင်ဟာတောက်ပနေသလိုခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမက All That Glitters ကဒ်ပေါ်မှာမျက်နှာဖုံး ၀ တ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီတော့မင်းကမင်းနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးရမယ်ထင်တယ်၊ မေးခွန်းနံပါတ် ၂ အတွက်ဒီမှာခွက်ခုနစ်လုံးရှိတယ်။
ငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်၊ မင်းကဟုတ်တယ်လို့မေးရင်မေးခွန်းမရှိဘူး။ သို့သော်အခြားသူများအတွက်မူကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုကိုအခြေခိုင်ရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားမိသည်။ သင်အနည်းငယ်အာရုံပျံ့လွင့်နေသည်ဟုခံစားရသည်။
ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲတောင်းဆိုပါစေမင်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေပြီးအာရုံပျံ့လွင့်စရာမလိုဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ခင်ဗျားမေးသမျှပဲ၊ ဒါကမင်းကိုအာရုံအနှောင့်အယှက်ပေးသလိုခံစားရတယ်။ မေးခွန်းနံပါတ် (၃) အတွက်သင်၌နေရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သေချာတာပေါ့၊ မင်းဒီမှာကံကောင်းတာပဲ။ ငါနေ့ကိုကယ်တင်ပါလို့ပြောချင်တယ်၊ မင်းရဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့ရှာဖွေမှုကဘာလဲဆိုတာငါပဲ။ ငါနေ့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါကငါ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာ။ Scorpio ကိုလာကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်ဒီမှာ Scorpio ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့နေ၊ လနဲ့နေထွက်မှုတို့ကိုဒီလဒါမှမဟုတ်နောက်သုံးလမှာသင့်အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုအပြည့်အ ၀ တန်ဖိုးထားပါ။ ငါငါးအတွက်အတူတူပြုမိပါပြီ။ ငါစာသားကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်လာမည့်လ, နောက်သုံးလမပြောပါနဲ့
နောက်လမှာငါမယုံတော့ဘူး ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာရှိနေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်၏နေ၊ လနှင့်နေထွက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရန်သေချာစေပါ၊ သို့သော် Scorpio ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၊ သင်၏လကိုပျော်မွေ့ပါစေ။
နှစ်ခုရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာများ၏လနှင့်ဆက်စပ်စက်တင်ဘာVirgo နှင့် Libra ဖြစ်ကြသည်။ မွေးဖွားသူများစက်တင်ဘာ1st မှစက်တင်ဘာ၂၂ ယောက်သည်အပျိုကညာအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်လက်မှတ်ထိုး။ တစ် ဦး အဖြစ်ရာသီခွင်အများဆုံးနားလည်မှုနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်များအပျိုကညာကိုသူတို့၏ပင်ကိုကရုဏာဖြင့်အလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်။
2021 Scorpio အတွက်ဘယ်လိုနေလဲ
Scorpio ဘဏ္20ာရေးခန့်မှန်းချက် 2021: ရှိပါတယ်မိသားစုပိုက်ဆံသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ထံမှငွေရေးကြေးရေးအကူအညီအချို့ရနိုင်သည်။ သင်ငွေရေးကြေးရေးအရအဓိကထားပြီးသင်၏မိသားစုကိုဘဏ္ancesာရေးအရကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေတိုးတက်မှုအတွက်ဇွန်လအထိမစောင့်ပါနှင့်။၂ ။ 2021 ။
အောက်ပါတို့သည် Scorpio အတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ၊ အစိမ်းရောင်သုပ်များ, beets, ပဲဟင်း, ဗာဒံသီး, walnuts, citrus အသီး, သီး, ပန်းသီး, ငှက်ပျောသီးနှင့်နာနတ်သီး။ မစားပါနှင့်။ Scorpios များသည်ကြီးမားသောအစားအစာများကိုမစားသင့်ပါ။
မင်းသမီးနက္ခတ်ဗေဒင်ကာလအတွင်းအထူးအခွင့်အလမ်းရှိသည်နှစ်2022 ၏, ဒါပေမယ့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းအလှအပ, ရန်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်အချစ်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်ရရန်သတ္တိအချစ်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ စိတ်ပြင်းပြမှုနှင့်ရဲရင့်မှုတို့ဖြင့်ပင်။
သဟဇာတဗေဒင်မှာတွေ့ရှိချက်အရ,Scorpio ရဲ့ဆက်သွယ်မှုနယ်ပယ်တွင်ထိပ်တန်းဖြည့်စွက်ဆိုင်းဘုတ် ၅ ခုသည်ကင်ဆာ၊ ကက်စကူဂို၊ ဗရို၊ ပိစ္စနှင့် Taurus တို့ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးသော Leo နှင့် Aquarius တို့ဖြစ်သည်။၁၇ ။ 2021 ။
သို့သော်ကင်းမြီးကောက်ရေအမှတ်အသားတစ်ခုသည် Libra ၏ဘဝတွင်ဒရာမာများစွာပြသနိုင်ပြီးကင်းမြီးကောက်သည်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာသည်ရန်သူသံတမန်ရေးနှင့်ခွင့်လွှတ် Libra ၏။ အရာရာတိုင်းဟာခင်မင်ရင်းနှီးမှု (သို့) ဆက်ဆံရေးကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဟန်ဆောင်နေလျှင်၊မင်းသမီးအကြောက်လွန်ရောဂါဖြစ်လာနိုင်သည့်အရာသည်မလွဲandကန်ဖြစ်လာပြီးပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။၁၃ ။ 2019 ။